Lugta PSG - PSG: Cavani waxaa laga ceyriyay iskuulka taageerayaasha, Pierre Ménès ayaa amaanaya - FOOT 01 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Cayaaraha PSG - PSG: Cavani waxaa laga ceyriyay iskuulka taageerayaasha, Pierre Ménès wuxuu ku bogaadiyey - FOOT 01
Lugta PSG - PSG: Cavani waxaa laga ceyriyay iskuulka taageerayaasha, Pierre Ménès ayaa amaanaya - FOOT 01
Markii shaqada laga eryay Edinson Cavani kow iyo tobankii, tababare Thomas Tuchel wuxuu soo jiitay dhaleeceyn badan. Laakiin dhiniciisa, Pierre Ménès wuxuu si buuxda ugu raacsan yahay macalinka kooxda Paris Saint-Germain.
Edinson Cavani wuxuu ku koobnaaday kursiga keydka ka dib markii uu ka faa iideystay Paris Saint-Germain, xaalada waxa ay dhalisaa jawaab celin aad u badan. Sawirka Daniel Riolo, dad badani waxay aaminsan yihiin in gooldhaliyaha ugu fiican taariikhda naadiga uu u qalmo daaweyn kale. " Waxaas oo dhami way iga xanaaqaan Ayuu yidhi Pierre Menès, oo tixgalinaya in Mauro Icardi uu si fudud ku kasbaday booskiisa maqnaanshaha reer Uruguay. " Sidee loo caddeyn karaa xaqiiqda ka tagista kooxda reer Argentine si uu uga tago booska Matador, marka laga reebo doorkiisii ​​taariikhiga ahaa ee uu ku soo qaatay kooxda iyo jacaylka indho la’aanta ah ee taageerayaasha badan? Maya, taasi maahan sida aan u maamulno koox, waxaan u maamulnaa naadi Ka faallooday la-taliyuhu blog.
« Sharciga garoonka, ee tartanku, maahan Iskuulkii taageerayaasha ee qof walba ku guuleystoayuu sii waday. Nasiib darrose isaga, Uruguayan wuu dhaawacmay, badalkiisa wuxuu ahaa mid aad uga badan guul, tartankana hada waxaa lagu rakibay booskan weerarka dhexe, Icardi, laakiin sidoo kale Mbappé oo booskaas ka iftiimiyey xilli ciyaareedkan ee la soo dhaafay. Aniguna waxaan u arkaa wax aan caadi ahayn in wareegtada la mid ah, in Cavani ay tahay inuu dib u helo booskiisa, adeegyada la qabtay awgood. Waan ka xumahay. Marka waxaa laga yaabaa inuu hal, labo ama seddex gool ka dhaliyo Brest qof walbana wuxuu dhahayaa "halkaan, Matador ayaa soo laabtay". »
"Midkoodna ma ciyaari doono"
« Laakiin hadafka PSG ayaa ah in ugu dambeyntii la soo gabagabeeyo wareega quarter-finalka Champions League, oo aan aheyn inuu ku qanciyo Mr. Cavani qandaraaskiisii ​​ugu dambeeyay. Waa inaadan khaldami oo aad wax walba la dagaasho. Caadi ma ahan, xukumay Menes. Waxaas oo dhan waxaa kasii dheer in la xuso in yoolalka ugu dambeeyay ee 13 ee PSG ay ka diiwaan gashanaayeen Mbappé (6) iyo ... Icardi (7). Si kasta ha noqotee, dhibaatada si toos ah ayaa loo xallin doonaa marka kulamada waa weyn ee Champions League ay imaan doonaan. Maxaa yeelay fikradayda, midna ma ciyaari doono. Tuchel ayaan qadka dhexe ugaga tegi doonin seddex Marquinhos-Gueye-Verratti sidaas darteedna safka hore ayey ku geli doonaan Di Maria, Neymar iyo Mbappé. Marka laga reebo dhaawaca, sida iska cad… Madax xanuun weyn ayaa soo foodsaara macalinka Parisi.
CAN U23: Ghana waxay xushmeysaa Cameroon
Seattle waxay martigelin doontaa Toronto FC finalka MLS Cup